SIDA LOOLA SHAQEEYO SAWIRKA DALKA OO LEH GACMAHOODA: TALOOYIN WAXTAR LEH IYO KHIYAAMO - INFRASTRUCTURE
Guri ayaa mar hore loo dhisay dhismaha, injineernimada iyo isgaarsiinta isgaadhsiinta waa la dhammeystiray, waana waqtigii lagu bilaabi lahaa goobaha madadaalada, socodka beerta, qurxinta. Dariiqyada ku wareegsan guriga ma aha oo kaliya in ay ka baxaan dibedda, laakiin sidoo kale ka ilaali cadaadiska lakabka ciidda ee aasaaska, iyo lugaha lugaha si fudud ayaad u heli kartaa meel kasta oo ka mid ah goobta, xitaa haddii dhulka uu dhaqo ka dib roobka.
Si dhammaan shaqooyinkaas loo fuliyo si tayo leh, goobta waa in loo diyaariyaa adigoo ka saaraya dhammaan isdaba-joogga suurtagalka ah ee dusha sare. Sida sariiraha ama cawska, halkan dusha si siman ayaa muhiim ah.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad baratid sida loo qorsheeyo aqalladaaga xagaaga iyo sida loo sameeyo darbiga xajinta ee xagaaga xagaaga.
Marka lagu waraabiyo goob xaaraan ah, marka hore, biyaha waa la wada baabbi'iyey, iyo marka labaad - si siman. Xaalad kale, heerarka sare, qoyaan ma noqon doono ku filan, iyo in godadka waxay noqon doontaa in ka badan, taas oo kicin kara kallana xidid dhirta.
Waqtiga ugu haboon ee lagu barbar dhigo dhulka waa dayrta, meelaha wareegsan waxay u baahan yihiin in la qodo oo laga tago ilaa guga. Inta lagu jiro xilliga roobka iyo qaboobaha jiilaalka, oo laga yareeyey isbeddelka heerkulka iyo soo-gaadhista qoyaanka, ciidda si weyn ayey ufududeysaa, lagu quudiyo walxo waxtar leh iyo guga ayaa diyaar u ah beeritaanka dhirta beeraha.
Sidee iyo sida loola socdo qorshaha
Waxaa jira fursado dhowr ah oo loogu talagalay sida loo yareeyo sawirka waddanka, laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad sameyso shaqada diyaarinta: Dharbaaxo, nadiifinta qashinka, dhagxaanta waaweyn iyo dhagxaanta.
Hagaajinta waxaad u baahan doontaa:
baararka qoryaha qoryaha;
oo ah gabadh baalasheeda;
Roodle iyo qalabka beerta.
Cidhifyada beerta la soo jeediyey ama cawska, ku dhex wado qoryaha, u fidi xarigga iyaga u dhig si aad u sarreeya heerkulbeegga oo dhan - tani waxay noqon doontaa hage.
Buuraha waxaa la saaraa majarafad, lakabka sare ayaa la dhigaa dhinacyada. Haddii xididdada dhirta ay ku sii jiraan dhulka, waxaa la soo saaraa dhaqdhaqaaq yar oo shinaal ah. Cayayaanka ayaa markiiba ku dhici kara ciidda hurda ee laga saaro buuraha. Ka dib markii shaqada la dhammeeyey, waxay ku gudbaan wareega wareegga wareegga, ka dibna, si aysan dhulku u dhicin, waxay ku tuntaan roog. Rinkada barafka ayaa si madax bannaan loo samayn karaa: miisaankeena foosto leh dhagax ama dhagax yar, xiro oo dusha sare dhulka ku duub.
Muddo ka dib, carrada ayaa hoos u dhigi doonta, waxaad u baahan doontaa inaad ku shubto lakabka sare iyo markale mar kale.
Ma taqaanaa? Sandy Sandy, inkastoo maqnaanshaha nafaqada ee ku jirta, waxay leedahay hal tayo qiimo leh: sababtoo ah qaabkeeda dhuxusha, ma dabooli karo qoyaanka, si sahal ah u dhaafa oksijiinka, iyo kalluunka rootka ee noocaan oo kale ah carrada ma laha fursad nolasho.
Ka hor inta aan la shaqeynin, waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ciidda goobta ku haboon tahay dhirta kobcaya. A carrada nafaqo wanaagsan waa inuu ahaadaa ugu yaraan badh mitir (lakab sare).
Isku daadiga ciidda waxaa lagu iibsan karaa dukaamo khaas ah, waa in la nadiifiyo ciidda dhoobada leh ciidada qaab dhismeedka oo ka badan.
Mishiinka ama kalluunka
Haddii dhulku yahay mid ballaaran, laga bilaabo 5 hektar, markaa fursadda ugu wanaagsan, sida loo qiyaaso dhulka dhulka, waa iyadoo la adeegsanayo motoblock ama kalluumeysi. Farsamooyinka noocan oo kale ah sida qalabyada la fuushay waxay ka tirtirayaan isdifaaca ilaa 15 cm qoto dheer.
Waa muhiim! Ka dib markii habka noocaas ah, waa in la qasbo in ay dalka ka dhumiso. Daaweynta kaneecada fudud ayaa la yareeyaa biyaha karkaraya carrada, habka loo burburiyo sheyga waxyeelada leh ee lakabka sare, iyo sidoo kale miraha weedka. Goobaha ballaadhan, ku amraan daaweynta mashiinka dhuxusha, sameynta daawada sulfur, oxide copper.
Waxay ku dhaafaan qulqulka dhowr jeer jihooyin kala duwan, ka dibna markaad qaaddo waxay ugu dambeyn dhajiyaan, iyaga oo isla markaa ka saara qashinka khudradda iyo dhagaxyada. Xaaladdan oo kale, waxaad sidoo kale u kala bixin kartaa heerkulka si ay u dhammeystiraan dhammaadka dhammaystirka.
Xaaladda degaan aad u adag oo la dayacay, waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato xayawaan. Baaldiyaha mashiinka ayaa awood u leh in la qabsado lana marsiiyo lakabyada dhulka ilaa mitir. Isku-dhajinta waxaa lagu talinayaa laba jihooyin: wadajir iyo guud ahaanba.
Laguma sheegi karo in wax kasta oo aan caadi ahayn ee dhulka dushiisa ay si xun u saameeyaan dhalidda, laakiin beeritaanka iyo daryeellidda dalaggu waa mid aad u habboon oo ka sii macquulsan sariiraha xitaa. Waxay u sahlan yihiin cawska, loosen, waraabinta biyaha ayaa dhaqaal ahaan u isticmaala.
Waxyaabaha soo jiidashada leh iyo cawska si fiican loo qabtey waxay ku xiran tahay dusha sare ee dhulka. Sababtoo ah godadka ay biyuhu ku ururinayaan, cawska ayaa si joogto ah u miiri doona, cawsku wuu ka fuqi doonaa xididada; tubercles iyo knawlada dusha sare ayaa si weyn u ciriiri doonta cawska. Sidee loo cabbiraa aagga cawska ah ee cawska leh gacmahaaga, aynu fahanno.
Sida cawska waxay u isticmaalaan foornada cagaaran ee cawska, a brat chelled.
Iyada oo ay caawimaad ka heleen jeexjeexyada iyo twin, waxay dejiyaan heerarka, meelaha ay si weyn uga soocaan heerka, waxay ka saaraan lakabka qoyan, oo ay ku daboolaan matag, oo uga tagaan hooska. Faa'idada hurdada (pre-diyaarinta) dhulka la soo dhoofiyo, gooyaa tubercles. Marka lakabka yar ee dhulka nafaqada ah soo dhoofiyo ciidda bacriminta isku dhafan laga soo saaro dusha sare ee cawska. Carrab culus ayaa lagu qasi karaa ciid iyo peat, kan dambe wuxuu ku darsaday boqolkiiba 20% wadarta guud.
Waa muhiim! Haddii cawsku uu leeyahay kala duwanaansho ballaaran oo dusha sare ah, ka dibna lakabka sare waa in si buuxda looga saaraa, oo aan qayb ahaan ahayn. Si aad uhesho hoostiisa hoostiisa, daboolay muddo ka badan bil gudaheed, ma ahan wax macquul ah, inta lagu jiro waqtigan maadada wax ku oolka ah ee dhiman iyada oo aan la helin hawada.
Ka feker sida loo habboon yahay aagga siiba mugdi. Wixii kor u qaadaya xayawaan weyn waxaa laga yaabaa in ay faa'iido ku haboon tahay beerashada ciidda ama ciidda ka baxsan dhismaha.
Lakabka sare ee bacriminta ayaa laga saaraa dusha sare iyadoo la adeegsanayo qalab caawiye ah, dhargo iyo godad la shubay, ka dibna lakabka hore ee laga saaray carrada waxaa lagu faafiyaa dusha sare. Goobta boodada, tuulada waxaa la sameeyaa ka weyn, si tartiib tartiib ah ula socota calaamadda la rabo. Markaad xajisid jiirada, waxaad isticmaali kartaa habka isku dhafan: ku wadida boogaha iyo ku shub carrada ilaa dhererka dhererka.
Haddii goobtu ay hoos u dhigto cawska, waxaad ka tagi kartaa xayndaab ilaa 3%, sidaa daraadeed waxay u fiicnaan doontaa in la hubiyo socodka biyaha inta lagu jiro roobabku.
Ma taqaanaa? Kuwa ugu caansan adduunka ayaa aaminsan cawska ka jira Baarlamaanka Australia Canberra. Nidaam ah 8 kun oo rusheeyaha ayaa loo sameeyey si loo baadho jasiiradaha cagaaran. Waxaa xusid mudan, hal nin Paul Janssens wuxuu maamulaa nidaam weyn.
Dusha sare ee beerta ama beerta waxay fududeyneysaa daryeelka carrada iyo dalagyada beeraha, sida goobtu waxay u eegi doontaa si quruxsan oo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, dusha sare, waxaa sahlan in la abaabulo madadaalo nasasho ama qaar ka mid ah sheyga naqshadeynta.